१. आदेश प्रक्रिया के हो?
२. म कसरी मेरो अर्डरको स्थिति ट्र्याक गर्न सक्छु?
What. कुन विधिहरू म अर्डरको लागि भुक्तान गर्न सक्छु?
फ्लोरिस्टम.रू के हो?
Why. म किन कार्ड मार्फत भुक्तान गर्न सक्दिन?
Can. के तपाई ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि कार्ड भुक्तान सुरक्षित छ?
I. म नगद भुक्तान गर्न सक्छु?
The. फिर्तीले कसरी काम गर्छ?
There। के त्यहाँ कुनै ग्यारेन्टीहरू छन् कि भुक्तान गरिएको रकम तपाईंलाई पाउनेछ?
१०. कुन विधिहरू क्रममा भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ?
११. के द्रुत डेलिभरी सम्भव छ?
वितरण लागत के हो?
१ delivery. के वितरण ठीक समयमा गर्न सकिन्छ?
१.. म एक अर्डर गर्न सक्छु यदि मलाई प्रापकको ठेगाना थाहा छैन?
मलाई कसरी डेलिभरीको बारेमा जानकारी दिइनेछ?
१.. के म अर्कै देशमा डेलिभरीको लागि अर्डर राख्न सक्छु?
१ When. आदेश कहिले पठाइनेछ?
अर्डरको बारेमा प्रश्नहरू
१.. अर्डर कसरी गर्ने?
19 यदि तपाईंलाई गुलदस्ता मनपर्दैन भने के गर्ने?
२०. म फोन द्वारा फूलहरू सम्पर्क गर्न सक्दिन। के गर्ने?
२१. यदि डेलिभरी समय प्राप्तकर्तासँग सहमत हुन आवश्यक पर्‍यो भने उनीहरू कहिले फोन गर्छन्?
22. के मैले अग्रिम क्रममा अर्डर गर्नु पर्छ?
कर्पोरेट अर्डर कसरी गरिन्छ?
२ legal. कानूनी संस्थाका लागि सम्झौता
दर्ता कसरी गरिन्छ?
२ colors. अर्डर गर्न उपलब्ध र of्ग थोरै स ?्ख्या के हो?
गुलदस्ता बारे प्रश्न
२qu. गुलदस्ता वा यसको रंग योजनाको अवयवहरू परिवर्तन गर्न सम्भव छ?
२.. गुलदस्ताको रचना तपाई कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ?
२।। म कसरी बुकेको आकार पत्ता लगाउन सक्छु?
.०. म सुपर अफर सेक्सनमा के पाउन सक्छु?
.१. के तपाईंलाई केही फूलहरूको गुलदस्ता चाहिन्छ भने नि?
Qu२. के गुलदस्ता साइटको तस्विरमा उस्तै हुनेछ?
गुलदस्ता ठूलो बनाउन सकिन्छ?
It 34. भाँडामा वा बिरुवाहरूको लागि फूलहरू किन्न सम्भव छ?
। 35. म अर्डरको लागि मेरो ईच्छा कहाँ राख्न सक्छु?
फूलहरू ताजा हुनेछन्?
सेवा गुणवत्ता ग्यारेन्टी फ्लोरिष्टम.रु
। 37. वेबसाइट मार्फत भुक्तान सुरक्षित छ?
I 38. म मेरो पैसाको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता लिन सक्दिन?
The।। म कसरी भुक्तानी गरिएको रकम फिर्ता पाउन सक्छु?
My०. म कहाँ गुनासो गर्न सक्छु?
.१. म कसरी समीक्षा लेख्न सक्छु?
Reviews२. के सबै समीक्षाहरू वास्तविक छन्?
I 43. के म पोष्टकार्ड सहित गुलदस्ता पठाउन सक्छु?
I 44. के म गुलदस्ता बाहेक अरू केहि अर्डर गर्न सक्छु?
Card 45. गुलदस्तासँग कुन कार्ड पठाइनेछ?
। 46. के म वितरित गुलदस्ताको साथ प्राप्तकर्ताको फोटो देख्न सक्छु?
You 47. तपाईसँग स्मार्टफोन अनुप्रयोग छ?
शहरमा गुलदस्ता छनौट किन फरक छ?
In।। किन क्षेत्रहरुका मूल्यहरु मास्को भन्दा बढी छ?
सर्वप्रथम, तपाईं डेलिभरी शहरलाई स indicate्केत गर्नुहुन्छ, यस माथिको बटनमा क्लिक गरेर तपाईंलाई मनपर्दो गुलदस्ता चयन गर्नुहोस् र चेकआउट पृष्ठमा जानुहोस्। यहाँ तपाईं प्राप्तकर्ताको डाटा, डेलिभरी समय र प्रेषकको डाटा निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। सफल भुक्तानी पछि, अर्डर फ्लोरिस्टहरूमा जान्छ। तपाइँलाई तपाइँको निर्दिष्ट फोन नम्बर र ईमेलमा पठाइएको सन्देश मार्फत डेलिभरीको बारेमा जानकारी दिइनेछ, र जानकारी पनि तपाइँको व्यक्तिगत खातामा फ्लोरिस्टुम.रुमा उपलब्ध छ।
हामी तपाइँको अर्डरको स्थितिको बारेमा नयाँ जानकारी एसएमएस सन्देशहरू, इ-मेलहरू मार्फत पठाउँदछौं, तपाइँ हाम्रो वेबसाइटमा तपाइँको व्यक्तिगत खातामा पनि अर्डर स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्ना गुलदस्ता स .्कलन गर्ने फ्लोरिस्टको अर्डर र सम्पर्कहरूको लागि भुक्तानीको रसिदको बारेमा एक एसएमएस र ईमेल सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईं कुनै पनि समयमा फ्लोरिस्टलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, स्थिति स्पष्ट पार्न वा फूल अर्डर गर्ने प्यारामिटरहरूमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ एक व्यक्ति को लागी एक बैंक कार्ड प्रयोग गरी वेबसाइटमा सिधै भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ। कानूनी संस्थाहरूको लागि, बैंक स्थानान्तरण मार्फत भुक्तान उपलब्ध छ।
फ्लोरिस्टम.रू एक सुविधाजनक सेवा हो जहाँ विश्वभरका फूल पसलहरू र व्यक्तिगत फ्लोरिस्टहरूले आफ्ना उत्पादहरू बिक्रीको लागि राख्छन्। यहाँ तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको शहरबाट पुष्पगुच्छबाट गुलदस्ता अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईंको इच्छालाई पूर्णरूपले पूर्ण गर्दछ। थप रूपमा, वास्तविक ग्राहकहरूले साइटमा समीक्षा पोष्ट गर्छन्, जुन सुविधाजनक छ जब फूल डेलिभरीको लागि अर्डर राख्न ठाउँ छनौट गर्दा। फ्लोरिस्टम.आर.यू. ले तपाईंलाई अर्डरको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी दिन्छ, अप्रत्याशित परिस्थितिमा सेवाले तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नेछ, फ्लोरिस्टहरू र पसलहरूले अर्डर पूरा भएको तीन दिन पछि मात्र फूल वितरणको लागि पैसा प्राप्त गरेको तथ्यका कारण सम्भव छ, यस अवधिमा ग्राहकले उजूरी दर्ता गर्न र पैसा प्राप्त गर्न सक्दछ फिर्ता
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको बैंक कार्ड विवरणहरू सही प्रकारले प्रविष्ट गरिएको छ, नाम र थर नाम अ in्ग्रेजीमा ठीक कार्डमा जडित छन्। CVV कोड digit अंक कार्डको पछाडि अवस्थित छ। प्राय जसो केसहरूमा, प्रणालीले तपाईंलाई बुझाउनेछ कि किन भुक्तानी सफलतापूर्वक पूर्ण गर्न सकिएन। यदि भुक्तानी तपाईंको बैंक द्वारा अस्वीकार गरिएको छ भने, तपाईंको कार्डबाट टोल फ्री नम्बर प्रयोग गरेर समर्थन सेवामा सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस्। तपाइँको अर्डर को लागी एक फरक भुक्तानी विधि छनौट गर्न को लागी कोशिश गर्नुहोस्।
हो, हामी हाम्रो ग्राहकहरु को लागी सुरक्षा ग्यारेन्टी दिन्छौं। भुक्तानी एक अलग सुरक्षित पृष्ठमा गरिएको छ, र कार्ड डेटा भुक्तानी पछि प्रणालीमा बचत गरिएको छैन। हामी नाडेज्दा र प्रख्यात क्लाउडपेमेंट्स भुक्तानी प्रणालीसँग सहकार्य गर्दछौं।
आज यो असम्भव छ। निकट भविष्यमा, नगद मा फूल वितरणको लागि भुक्तान हाम्रो ग्राहकहरु को लागी उपलब्ध हुनेछ, त्यसपछि अर्डर मा आवश्यक जानकारी भरिसके पछि, तपाइँलाई तपाइँको मनपर्ने धेरै भुक्तान विधिहरु प्रस्ताव गरीन्छ।
अर्डर रद्दको मामलामा, भुक्तान गरिएको रकम business व्यापार दिन भित्र तपाईंको बैंक खातामा पूर्ण फिर्ता हुनेछ।
बैंक कार्डको साथ अर्डरको लागि भुक्तान तत्काल छ। हामी क्लाउडपेमेंट्स प्रणालीसँग काम गर्छौं, जुन एक भुक्तान सिद्ध विधि हो। भुक्तानी गरेपछि, तपाईले सन्देश प्राप्त गर्नु हुनेछ कि अपरेशन सफल भयो। तपाईको व्यक्तिगत खातामा तपाई यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँ तपाइँको अर्डर को लागी वेबसाइट मा एक बैंक कार्ड को माध्यम बाट वा नगद रसीद मा भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ। कानूनी संस्थाले क्याशलेस भुक्तान सेवा प्रयोग गर्न सक्दछ।
प्रत्येक बुकेको छेउमा समय छ जुन फूलहरूको डिजाइन र डेलिभरीमा खर्च हुनेछ। साइटसँग एक सुविधाजनक फिल्टर "फास्ट डेलिभरी" छ, यसलाई प्रयोग गर्दै, तपाईले गुलदस्तेहरूको लागि विकल्प देख्नुहुनेछ जुन छोटो अवधिमा वितरित गर्न सकिन्छ।
शहरमा डेलिभरी नि: शुल्क हो, राजधानी र सेन्ट पिटर्सबर्गमा - रिंग रोड भित्र। यदि वितरण ठेगाना शहर बाहिर छ भने, तब यसको लागत स्वत: गणना गरिन्छ। प्रणाली, किलोमिटरको दूरीमा आधारित, तपाईंलाई डेलिभरी मूल्य दिनेछ। सामान्यतया यो प्रति १ किलोमिटर 45 1 रूबल अनुमान गरिन्छ।
यदि तपाईं सहि डेलिभरी ठेगाना संकेत गर्न सक्नुहुन्न भने, तर प्राप्तकर्ता तुरून्त शहर बाहिर हुनेछ जब तपाईं गुलदस्ता पठाउँदै हुनुहुन्छ, तब एक कर्मचारीले तपाईंलाई निश्चित रूपमा यो मुद्दा समाधान गर्न कल गर्दछ।
वेबसाइटमा, तपाइँ प्रति घण्टा वितरण अवधि निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवस, हाम्रो सेवा सहि समय द्वारा डेलिभर छैन। तर हामी प्रत्येक ग्राहकको लागि एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण खोज्ने प्रयास गर्दछौं, ताकि तपाईं अर्डरको लागि तपाईंको इच्छालाई संकेत गर्न सक्नुहुनेछ, र हाम्रा कर्मचारीहरूले तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक संभव प्रयास गर्न प्रयास गर्नेछन्।
अवश्य पनि, हामीलाई प्राप्तकर्ताको फोन नम्बर मात्र छोड्नुहोस्। कुरियरले उसलाई कल गर्नेछ र तपाईंको अर्डरको समय र स्थान डेलिभर गर्नेछ।
एक अर्डर राखे पछि, तपाईले आफ्नो अर्डरको स्थिति जाँच गर्न एक अद्वितीय लिंकको साथ सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरेर, तपाईं फ्लोरिस्टहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, समाप्त बुकेको फोटोहरू हेर्न र नक्सामा तपाईंको अर्डरको स्थान ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। डेलिभरीको अन्त्यमा, तपाईं फ्लोरिस्टलाई एक समीक्षा लेख्न सक्नुहुन्छ जसको साथ तपाईले सहयोग गर्नुभयो। ग्राहकहरू प्रतिक्रिया दिंदा हामी खुसी हुन्छौं, ताकि तपाईले हामीलाई फर्डर डेलिभरीको अर्डरको सामान्य छापहरूको साथ एक प्रतिक्रिया सन्देश पठाउन सक्नुहुनेछ।
हो, हाम्रो सेवाको सहयोगमा तपाईले देशभरि मात्र होइन, तर विश्वभरि नै फूलहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। केवल शहर टाइप गर्नुहोस् जुन तपाईले खोज्न चाहानुहुन्छ खोजीमा र तपाईलाई सबै उपलब्ध विकल्पहरू देखाइने छ बुकेहरूका लागि।
प्रत्येक गुलदस्ता नजिकै एक समय हुन्छ, जुन दर्ता र ठेगानामा गुलदस्ता वितरणको लागि आवश्यक हुन्छ। जब एक अर्डर राख्नुहुन्छ, यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न नबिर्सनुहोस्। यदि तपाईंलाई तत्काल फूलहरू वितरण गर्न आवश्यक छ भने, त्यसपछि फास्ट डेलिभरी फिल्टर प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईंलाई कुनै निश्चित मितिमा डेलिभरी चाहिन्छ भने, अर्डर राख्दा यसलाई छान्नुहोस्। यदि तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत खाता मा "रिमाइन्डर" शब्द को लागी एक टिक राख्नुभयो भने, तब फ्लोरिस्टम.रू सेवाले तपाइँको अर्डरको सम्झना गराउँदछ। यो पत्र तपाईंसँग अनुसूचित वितरण दिन भन्दा तीन दिन अघि आउनेछ।
केवल डेलिभरीको स्थान संकेत गर्नुहोस्, तपाईंलाई मनपर्दो गुलदस्ता छनौट गर्नुहोस् र अर्डर गर्नुहोस्। क्रममा, प्रेषक र प्रापकको सम्पर्क विवरण, साथै वितरण समय संकेत गर्नुहोस्। अर्डरको सफल भुक्तानी पछि, हाम्रा फ्लोरिस्टहरू यसलाई काममा लिन्छन्। तपाईंलाई सन्देश बाट डेलिभरी सूचित गरिनेछ।
यदि तपाईंलाई कुनै पनि कारणका लागि प्राप्त फूलहरू मनपर्दैन भने, त्यसो भए तपाईंको व्यक्तिगत खातामा जानुहोस् वा तपाईंलाई सन्देश वा मेलमा पठाईएको लिंक अनुसरण गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईं आफ्नो अर्डर को बारे मा प्रतिक्रिया छोड्न सक्नुहुन्छ। यदि समीक्षा नकारात्मक छ, त्यसो भए तपाइँले विवाद खोल्न सक्नुहुन्छ, तब कार्यवाहीको अवधिमा फ्लोरिस्टको खातामा पैसाको मात्रा स्थिर हुन्छ। हाम्रो सेवा को नीति अनुसार ग्राहकहरु पुष्पगुच्छ संग बदली गर्न वा पूरै रकम फिर्ता गर्न फूलवाला संग सहमत हुन सक्छ। फ्लोरिस्टहरूसँग पनि तपाईंलाई तलका अर्डरहरूमा छुट दिने अधिकार छ। गुलदस्ता वितरण पछि तीन दिन भित्र विवाद खोल्न सकिन्छ। यदि तपाईं पहिले एक स्टोर वा एक व्यक्ति फ्लोरिस्ट को लागी अर्डर को लागी एक राम्रो समीक्षा लेख्नु भएको छ भने, कि त विवाद खुल्दैन।
तपाईं बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ "म स्टोरमा जान सक्दिन"। यस अवस्थामा, फ्लोरिस्टले सूचना प्राप्त गर्नेछ जुन तपाईंले कल गर्न खोज्नु भएको थियो, र स्टोरको रेटिंग स्वत: कम हुनेछ। बदलेमा, हामी स्टोरमा सम्पर्क गर्नेछौं, र यसका कर्मचारीहरूले तपाईंलाई निश्चित रूपमा फिर्ता बोलाउँदछन्।
सामान्यतया प्रापकहरूलाई वास्तविक डेलिभरी अघि सम्पर्क गरिन्छ। कुरियर ठेगानामा ताजा फूलहरू प्रदान गर्न उपयुक्त समयमा सहमत हुनेछ। यदि तपाईं एक निश्चित मिति को लागी एक अर्डर राख्नु भयो भने, तब प्राप्तकर्ता लाई वितरणको दिनमा सम्पर्क गरिनेछ, सामान्यतया बिहान। तपाईंको व्यक्तिगत खातामा, तपाईं तपाईंको अर्डरको वितरण समय फेला पार्न सक्नुहुनेछ, यो प्राप्तकर्ताको लागि उपयुक्त समयमा परिवर्तन हुनेछ।
प्रत्येक गुलदस्ताको लागि, यसको रेजिष्ट्रेसन र वितरणको लागि न्यूनतम समय तोकिन्छ, यो प्रत्येक बुकेको छेउमा सूचित गरिन्छ। तपाईंसँग अग्रिम र डेलिभरीको दिनमा दुबै अर्डर राख्न अवसर छ।
हाम्रो सेवा सक्रिय रूपमा कानुनी निकायसँग सहकार्य गर्दछ र नियमित रूपमा कर्पोरेट अर्डरहरू गर्दछ, यसमा हामी एक स्वचालित प्रणालीद्वारा सहयोगी छौं। फूलहरूको विशाल वर्गीकरणले तपाईंलाई कुनै पनि अवसरको लागि गुलदस्ते छनौट गर्न अनुमति दिन्छ। जब एक अर्डर राख्नुहुन्छ, तपाईले कानुनी निकायको विवरण सूचित गर्नुपर्नेछ। इनभ्वाइस स्वत: तपाईंको मेलमा पठाइनेछ।
जब एक कानूनी संस्थाको रूपमा हाम्रो सेवामा पहिलो अर्डर राख्नुहुन्छ, तपाईंलाई स्वचालित रूपमा एक सम्झौता र इनभ्वाइसको साथ पत्र पठाइनेछ। तपाईले भर्नु पर्नेछ, हस्ताक्षर गर्नुहोस् र प्राप्त गरिएको सम्झौता दुईवटा प्रतिलिपिहरूमा हाम्रो मेलमा पठाउनुहोस्। त्यसो भए हामी तिनीहरू मध्ये एकलाई तपाईंमा पठाइदिनेछौं।
यदि तपाइँ अर्डर राख्नु अघि करार सम्झौतामा रूचि राख्नुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्: @
खरीदारले आफ्नो पहिलो अर्डर राखेपछि साइटमा स्वचालित रूपमा रेजिष्टर गर्दछ। तपाईंले अर्डर जानकारीमा निर्दिष्ट गर्नुभएको मोबाइल फोन नम्बर भविष्यमा तपाईंको लगइन हुनेछ। तपाईको व्यक्तिगत खाता प्रविष्ट गर्नका लागि कोड सन्देश मार्फत पठाइनेछ।
यदि तपाईं प्रति टुक्रा फूलहरू अर्डर गर्नुहुन्छ भने तपाईंले कम्तिमा7टुक्रा चयन गर्नुपर्नेछ। हामी तपाईंलाई "सुपर अफर" सेक्सनमा जान सल्लाह दिन्छौं, यो साइटको मुख्य पृष्ठमा फेला पार्न सकिन्छ। यहाँ थोक र खुद्रा स्टोरहरूको अफरहरू छन् अनुकूल मूल्य ट्यागको साथ।
हो तिमि सक्छौ। यदि तपाइँ छनौट गरिएको गुलदस्तामा केहि परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने अर्डरिंग प्रक्रियाको बखत थप जानकारीमा तपाईको इच्छालाई मात्र छोड्नुहोस्। हाम्रा फ्लोरिस्टहरूले सम्भावित प्रतिस्थापन विकल्पहरू छलफल गर्न तपाईंलाई कल गर्नेछन्।
गुलदस्ताको साथ चित्रको नजिक यसको रचनाको पूर्ण विश्लेषण छ। तपाईं फूलको कुनै पनि नाममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, यो चित्रमा रंगमा हाइलाइट हुनेछ।
गुलदस्ता को आकार प्रत्येक फोटो को लागी देखाइएको छ। तिनीहरू फ्लोरिस्टद्वारा दर्साईन्छ जुन फूलहरूको व्यवस्था हो।
यहाँ थोक र रिटेल स्टोरहरूबाट प्रस्तावहरू छन् गुलदस्ताका लागि अनुकूल मूल्यहरू सहित। थप रूपमा, तपाई व्यक्तिगत रूपमा फूलहरूको संख्या, प्रकार, स्टेम लम्बाइ र रंगमा निर्णय लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई आवश्यक फुलहरूको गुलदस्ता फेला पार्न, फिल्टरहरूको मद्दतमा हेर्नुहोस्।
हो अवश्य। फ्लोरिस्टहरूले गुलदस्ताको फोटोग्राफ पोष्ट गर्छन् जुन उनीहरूले पहिले नै संकलन गरेका छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई समान संरचना पुन: उत्पादन गर्न यो सजिलो हुनेछ।
हो, उत्पाद पृष्ठमा गएर, तपाईं qu०% वा %०% गुलदस्ता बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हो, बुकेको मूल्य मूल रकमको यस अंशले अधिक हुनेछ, र गुलदस्तामा समावेश गरिएका फूलहरू रचनामा थपिनेछ। यदि तपाईं एक प्रकारको फूलहरूको गुलदस्ता छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं तिनीहरूको संख्या कुनै पनि संख्याबाट बढाउन सक्नुहुनेछ।
सबै गुलदस्ता विकल्पहरू साइटमा प्रस्तुत गरिएको छ। हामी तपाईको खोजको लागि सुविधाजनक फिल्टरहरु प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछौं। तर हामी प्राय: फ्लोरिस्टहरूसँग काम गर्छौं जसले काटिएको फूलहरूसँग काम गर्छन्।
अतिरिक्त जानकारीमा अर्डर पूराको लागि तपाईंको इच्छा र शर्तहरू संकेत गर्नुहोस्। यदि तिनीहरू उपलब्ध छन् भने, फ्लोरिस्ट निश्चित रूपमा तपाईंलाई छलफलको लागि कल गर्दछ।
फ्लोरिस्टम.रू सेवामा सहयोग गर्ने फ्लोरिष्टहरू हाम्रो नियम जान्दछन्: “केवल ताजा फूलहरू! असहमत? फ्लोरिस्टम.रू तपाईको लागि होईन। त्यसकारण, तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि रचनामा केवल नयाँ फूलहरू समावेश छन्। गुलदस्ता वितरणको बखत, प्रापकले फूलहरूको ताजापनको मूल्यांकन गर्दछ। जे भए पनि, तपाईको रूचिमा रहेको प्रत्येक फ्लोरिस्टका लागि तपाईले हाम्रो वेबसाइटमा समिक्षा पाउन सक्नुहुन्छ।
Floristum.ru ग्यारेन्टी गर्दछ
हो, भुक्तानी एक छुट्टै पृष्ठमा गरिएको छ, र ग्राहक डाटा बचत गरिएको छैन। हामी केवल प्रख्यात र भरपर्दो प्रणालीहरूको साथ काम गर्दछौं।
हो अवश्य। जब अर्डर दिनुहुन्छ, तपाईं पहिले हाम्रो सेवाको खातामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ, जहाँ तिनीहरू भण्डारण हुन्छ अर्डर पूरा नभएसम्म र तीन दिन पछि। ग्राहकको अर्डरको बारेमा प्रश्नहरू राख्न यस्तो उपाय गरिन्छ। यस समयमा, तपाईंसँग विवाद खोल्ने अवसर छ, तब सबै समस्याहरू समाधान नभएसम्म फ्लोरिस्टको खातामा पैसा क्रेडिट हुनेछैन।
यदि अर्डर कामको लागि पहिले नै लिइएको छ भने, त्यसोभए तपाईंले १ देखि १ working दिन भित्र पर्खनु पर्छ।
यदि तपाईं अझै आफ्नो अर्डर संग निराश हुनुहुन्छ भने, समीक्षा लेख्न निश्चित गर्नुहोस्। यदि यो नकारात्मक छ, तब तपाईं फ्लोरिस्टसँग बहस खोल्न सक्नुहुन्छ। सबै परिस्थितिहरूको स्पष्टीकरणको समयमा, फ्लोरिस्टको खातामा रहेको पैसा अवरुद्ध हुनेछ। तपाईं पुष्पगुच्छलाई बदली गर्न वा पैसाको पूर्ण रकम फिर्ता गर्न सहमत हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रा फ्लोरिस्टहरू उनीहरूको ग्राहकहरूको मोल गर्छन्, त्यसैले तिनीहरू प्रायः पछिको अर्डरहरूमा उनीहरूलाई छुट दिन्छन्। गुलदस्ता वितरणको मिति देखि तीन दिन भित्र विवाद सुरु गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँले अर्डरमा पहिले राम्रो समीक्षा छोड्नुभएको छ भने, त्यसपछि विवाद खोल्न असम्भव छ।
फूलहरू डेलिभर भएपछि, तपाईंको फोन नम्बरमा सन्देश पठाइनेछ, जसको जवाफमा तपाईं फ्लोरिस्टसँग काम गर्ने आफ्नो छाप र अर्डर आफैंमा लेख्न सक्नुहुन्छ। साइटमा तपाईको व्यक्तिगत खाता प्रविष्ट गरेर तपाई समीक्षा लेख्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक स्टोरको धेरै समीक्षा हुन्छन्, ती मध्ये दुबै सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू छन्। तिनीहरू सबैको अगाडि संकेत लेखिएको छ कि समीक्षा कसले लेख्यो: ग्राहक वा प्रापक। समीक्षा केवल एक व्यक्ति द्वारा सम्पादन गर्न सकिन्छ जसले पहिले यो लेख्यो।
हामी प्रत्येक गुलदस्ताको लागि निःशुल्क पोस्टकार्ड प्रदान गर्दछौं। केवल ग्राहकले बधाई पाठ लेख्नु पर्छ। फ्लोरिस्ट कार्ड छनौट गर्दछ जुन तपाईंको गुलदस्ता र पाठसँग मेल खान्छ।
चेकआउटमा, तपाईलाई धेरै आईटमहरू पनि प्रस्तुत गरिनेछ। यदि तपाईंलाई यहाँ के चाहिएको फेला परेन भने स्टाफलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, तिनीहरू पक्कै तपाईंको सहयोगमा आउँनेछन्।
फ्लोरिस्टले तपाईले लेख्नु भएको पाठको आधारमा ग्रीटिंग कार्ड चयन गर्दछ। तर यदि तपाईंसँग विशेष इच्छाहरू छन्, तब उनीहरूलाई अतिरिक्त जानकारीमा सूचित गर्नुहोस् जब एक अर्डर राख्दा।
जब अर्डर दिनुहुन्छ, तब शब्दहरूको अगाडि एउटा टिक राख्नुहोस् "गुलदस्ताको साथ फोटो लिनुहोस्"। यदि ठेगाना सहमत हुन्छ भने, तब तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा वा इ-मेल मार्फत तस्विर भेट्टाउनुहुनेछ।
मोबाइल अनुप्रयोग "Floristum.ru फूल" चाँडै नै AppStore वा PlayMarket मा डाउनलोडको लागि उपलब्ध हुनेछ।
हाम्रो सेवाले विभिन्न शहरहरूबाट फ्लोरिस्टहरूलाई रोजगार दिन्छ। एक अर्डर दिदा, एक फूलवाला उहाँ संग काम गर्दछ, जसले तपाइँको मनपर्ने शहर मा एक प्रस्ताव प्रकाशित। प्रत्येक शहरमा विभिन्न फ्लोरिस्टहरू छन्, त्यसैले वर्गीकरण पनि भिन्न हुन्छ।
ठूला शहरहरूमा थुप्रै फ्लोरिस्टहरू छन्, त्यसैले उनीहरू ग्राहकहरूलाई न केवल विस्तृत दायरामा, तर कम मूल्यका साथ आकर्षित गर्दछन्।